Ama-Lexical Onomies: I-Synonymy, i-Antonymy, i-Hyponymy, i-Meronymy, i-Holonymy | Martech Zone
Ama-Lexical Onomies: Synonymy, Antonymy, Hyponymy, Meronymy, Holonymy
NgeSonto, ngoJulayi 22, i-2018 NgoMsombuluko, Julayi 23, 2018 Douglas Karr
As DK New Media ucwaninga igunya lokuqukethwe amasu esiwakhela amaklayenti ethu, kunendlela ehambisana nezihloko esizikhiqizayo, izikhala esizibonayo, nezinto eziseqhulwini esizidalayo. Okokuqala ezinye izincazelo:
Umnotho - imodeli yokuhlukaniswa kwemikhawulo emibili yokwakhiwa kwesiza.
Ngaphakathi kuwebhusayithi yakho namasu wokuqukethwe, ngokuvamile lezi yizigaba - ezaziwa njengeqoqo - lezihloko ezifana nazo. Vuliwe Martech Zone, sinezigaba ezifana analytics, ukumaketha nge-imeyili, ukumaketha kosesho, ukumaketha komphakathi, ukumaketha kwamaselula nokuningi. Sithuthukise leyo taxonomy ukuthi ibe enembile kubafundi bethu kanye nokuhlela okuqukethwe kwethu ngokufanele ukuze izinjini zokusesha zihlaziye isiza sethu ngokulandelana, zibone ukuthi yiziphi izihloko ezisemqoka zesayithi lethu.
I-Ontology - ukwenziwa kwezihloko ngenhloso yomuntu lapho imininingwane engafani imelwe ebudlelwaneni obunenjongo, nobungokomongo.
Ngaphakathi kuwebhusayithi yakho namasu wokuqukethwe, lokhu ngokuvamile yindlela omaka ngayo okuthunyelwe kwakho nama-athikili. Zonke izigaba, ngokwesibonelo, zingaba nokukhangisa kweminyaka eyinkulungwane okuhambisana namasu. Ngakho-ke siqinisekisa ukuthi sizimaka kahle izindatshana ukuze umuntu akwazi ukusesha kalula futhi athole izindatshana azifunayo kulo lonke uhlangothi lwezihloko.
Ukuba ne-ontology esebenza kahle futhi ehlelekile ukumaka kahle futhi ngamafuphi i-athikili ngayinye kuzohlela okuqukethwe kwakho ngempumelelo enkulu kakhulu kubafundi bakho. Ungawuthathi kancane umthelela wayo! Kuyasiza futhi ekuseshweni kwangaphakathi nama-athikili ahlobene kusayithi lakho futhi… ukugcina amakhasimende ebambe iqhaza isikhathi eside nokusiza ukuwahambisa asondele ekuguqulweni.
Yini ama-Lexical Onomies?
I-Lexical Kuchazwa noma kuhlobene namagama noma isilulumagama solimi. Ama-Onomies yimithetho noma imithetho ehambisana nethemu. Zonke izihloko ocabanga ukuzibhala zizoba namagama ahlobene asetshenziswa izivakashi nabasebenzisi benjini yokusesha. Lokhu kwaziwa njengama-lexical onomies.
Yini ama-5 Lexical Onomies
Umqondofana - amagama afanayo asetshenziselwa isihloko esifanayo. Isibonelo esikulesi siza singaba igama elithi "infographic". Abantu baphinde bababize nge- "Infographs", "Info ihluzo" kanye "Informational Graphics". Izinjini zokusesha zivame ukuhlakanipha ngamagama afanayo, kepha hhayi njalo. Bheka amagama afanayo bese usebenzisa idatha yevolumu yokusesha ukunquma ukuthi yini ethandwa kakhulu.
U-Antonymy - amagama aphikisayo noma ahlukile ahambisana nesihloko. Ngenkathi singaba nezindatshana zezindlela ezinhle kakhulu zokumaketha nge-imeyili, singaba nezindatshana ezikhuluma ngezenzo ezimbi kakhulu zokumaketha nge-imeyili. Kubalulekile ukuthi sibhale ngazo zombili ngoba izivakashi nabasebenzisi benjini yokusesha bazifuna zombili.
Umzenzisi - amagama akhethekile ahambisana nesihloko. Ngaphakathi analytics kunethoni lemigomo efana nokulandela ukuguqulwa, ukuphathwa komkhankaso, ukuhlukaniswa, ukuhlunga, njll. Kubalulekile ukuthi sihlole isihloko ngasinye futhi sibhale ngakunye kwalawo magama okukhethekile.
UMeronymy - amalungu esihloko sonke. Ikhasi lewebhu lakhiwe nge-HTML, i-CSS, imibhalo, ukushumeka nezithombe. Ngamunye wabo uyilungu noma ingxenye yekhasi lewebhu ngakho-ke uma sibhala ngokwakhiwa kwewebhu noma ngentuthuko, sidinga ukwazi wonke amalungu ukuze okuqukethwe kwethu kusibekele isihloko ngokuphelele.
UHolonymy - sonke isihloko esinemigomo sinaso ngaphansi kwaso. I-hashtag, i-URL efushanisiwe, umsebenzisi we-twitter, nomlayezo zonke izingxenye ze-Tweet. Singakhuluma ngakunye ngokuzimela, kepha kubalulekile ukuthi sixoxe ngakho konke kanye nezingxenye.
Ucabanga ukuthi usuqedile, akunjalo? Akusondele ngisho. Manje njengoba kuchazwa i-taxonomy ne-ontology, kubalulekile ukuthi udilize yonke iqoqo nesihloko bese ubheka izihloko ezihambisanayo ongabhala ngakho. Indlela elula yokwenza lokhu ukumane ubuze imibuzo - ubani, ini, kuphi, nini, ngani nokuthi kanjani.
Njengoba kuhlobene nokukhangiswa kokuqukethwe kanye nebhulogi yethu, esihlokweni esinikeziwe ngingahle ngiyehlukanise nemibuzo eminingi noma izihloko. Masisebenzise isibonelo esifana nalokhu ukumaketha amaselula bese wenza sengathi ngiyinkampani ethumela imiyalezo.
Ngobani ukumaketha kwami ​​kweselula ukuncintisana? Bangobani ukumaketha kwamaselula Ochwepheshe Ngingahle ngifune ukuxoxa?
Yimiphi imigomo ehambisana nokumaketha kwamaselula? Yiziphi izinkundla zokumaketha ezingamaselula ezingangisiza? Uhlobo olunjani lwembuyiselo ekutshalweni kwezimakethe engingaluthola ngokukhangisa ngamaselula?
Ngingaya kuphi ukuze ngifunde kabanzi mayelana nokumaketha kwamaselula? Zikuphi izibalo, i-infographics, amaphepha amhlophe, imiboniso, namavidiyo engingakwazi ukuwahlanganyela futhi ngihlanganyele nawo mayelana nokumaketha kwamaselula?
Inini imicimbi yokukhangisa ephathekayo, izingqungquthela, noma ama-webinar engingaya kuwo, ngikhulume kuwo, noma ngiwaxhase? Kunini lapho ukuthambekela okuthile kuhlotshaniswa nokumaketha kweselula?
Kungani ukumaketha kwamaselula kubaluleke kakhulu kubakhangisi? Kungani abathengisi behluleka ekukhangiseni okungamaselula?
Ngilakha kanjani isu lokuzijwayeza elihamba phambili maqondana nokumaketha kwamaselula? Baphumelela kanjani abathengisi bamaselula? Angakanani amathuluzi wokumaketha eselula?
Kuneminye imibuzo engamakhulu kodwa ungathola i-matrix ephelele yokuqukethwe ehlanganisa noma yisiphi isihloko uma usebenza nge-taxonomy, ontology, nama-lexical onomies ahlobene nemikhiqizo nezinsizakalo zakho.
Okulandelayo ukwenza ukuhlolwa kokuqukethwe kwakho, ukukhomba izikhala, ukuthola okuqukethwe okuncintisanayo okwenzela izimbangi, ukubeka phambili okuqukethwe kwakho nokuhlela ikhalenda lakho lokuqukethwe!
Funa ukuthuthukisa okuqukethwe osukubhalile ngezihloko ezithile ukuze kuphelele - noma bheka ukubhala okuqukethwe okudlula okuqukethwe yimbangi yakho okwamanje okuwina imiphumela yosesho. Lokho kungadinga ukuthatha izinyathelo ezingeziwe njengokukhiqiza amavidiyo, ama-infographics, amaphepha amhlophe, izifundo ezimayelana nama-podcast mayelana nesihloko.
Ufuna ukuqala okusheshayo ekuhlaziyweni kwakho? Hlola Phendula umphakathi
Tags: phendula umphakathiAmandla omnothoisiphikisoUHolonymyUkuzethembahyponymyama-onomies angama-lexicalUMeronymyi-ontologyUkuvumelanisaumqondofanai-taxonomy